पुरुषका दुइ अण्डकोष किन सानो र ठूलो हुन्छन ? | Miracle Nepal
पुरुषका दुइ अण्डकोष किन सानो र ठूलो हुन्छन ?
पुरुषका दुइ अण्डकोष किन सानो र ठूलो हुन्छन ? पुरुषको लिंगको फेदमा झुण्डिने अण्डकोष वा अण्डाशय पुरुषको एउटा प्रमुख प्रजनन अङ्ग हो। यसमा शुक्र...
पुरुषको लिंगको फेदमा झुण्डिने अण्डकोष वा अण्डाशय पुरुषको एउटा प्रमुख प्रजनन अङ्ग हो। यसमा शुक्रकीट अर्थात मानव प्रजननकोष उत्पादन गर्नुका सथै पुरुषत्व हार्मोनहरु पनि उत्पादन गर्दछ । लिङ्गको फेद नजिक झुण्डिएको पातलो छालाको थैली (अण्डकोष थैली) भित्र रहने दुईवटा रहेका दुइ अण्डाआकार (तर, अलि चेप्टो) अंगलाइ अण्डकोष भनिन्छ। यी अण्डकोष भित्र धेरै साना-साना नली आकारका भाग हुन्छन् जहां शुक्रकीटको उत्पादन हुन्छ।
१०-११ वर्षको उमेरबाट किशोरावस्थामा प्रवेशसंगै अण्डकोषको विकास प्रारम्भ हुन्छ।
अण्डकोषको तौल १० ग्राम देखि १४ ग्राम हुन्छ। तर, अण्डकोषका आकार र तौल व्यक्तिअनुसार फरक-फरक हुन्छ र मानिसको बनोट, उचाइ आदि कुरा जस्तै यस्को आकार पनि फरक हुनु सामान्य हो
यो अण्डाकार भए पनि अलिक् चेप्टो खालको हुन्छ।
सामान्यतः मानिसको देब्रे अण्डकोष दाहिनेभन्दा केही तल झोल्लिएको हुन्छ।
अण्डकोष सतह छाम्दा रबर छामेजस्तो, कुनै गिर्खा नभएको समथर सतह भएको हुन्छ।
कतिपय पुरुषहरुमा अण्डकोष सामान्य भन्दा सानो वा ठूलो हुने समस्या पनि देखिन्छ । अण्डकोषमा संक्रमण भएमा वा कुनै बिकार भएमा यसको सामान्य बिकास हुन नसकेर सानो वा ठूलो भएको हुनसक्छ । तर धेरै जसो अबस्थामा हामी आंफैले अण्डकोष ठूलो भएको वा सानो भएको चिकित्सकको सहायताबिना छुट्टयाउन सक्दैनौं। घरेलु रुपमा अण्डकोष असामान्य भएको थाहा पाउन निम्न कुरामा ध्यान दिनु उचित हुन्छ:
अण्डकोषमा कुनै गिर्खा हुनु हुँदैन।
अण्डकोषलाइ हल्का रुपमा छाम्दा वा त्यसै पनि दुख्यो भने यसमा समस्या भएको हुन सक्छ ।
काछमा भारीपनको अनुभव वा तानिएजस्तो अनुभब भएमा केही समस्य भएको हुन सक्छ ।
दुवै अण्डकोष समान आकार वा आयतनका भने हुँदैनन् तेसैले तिनमा सामान्य भिन्नता हुदैमा आत्तिनु पर्दैन। अनि, अण्डकोष समान रूपमा झुन्डिएका पनि हुंदैनन । तेसैले, एउटा अण्डकोष केही माथि र अर्को केही तल हुनु पनि सामान्य अबस्था हो । नदुख्ने किसिमले यो ठूलो हुनुको कारणहरूमा यसमा पानी जम्नु, रक्त नसा फुक्नु, सिस्ट जस्ता कारण पर्छन्। अण्डकोष बढ्ने कारणले अण्डको षको क्यान्सर हुनसक्छ। यस्तो बढीजसो १० वर्षभन्दा पहिले र २० देखि ४० वर्षको बीचमा हुन्छ।
न्यानो (तातो) पानीले नुहाएपछि अण्डकोषको परीक्षण गर्नुपर्छ। यसले अण्डकोष थैलीलाई खुकुलो पार्छ र अण्डकोष केही तल र्झछ, जसले गर्दा अण्डकोष परीक्षण गर्न सजिलो हुन्छ।
Nepali Sexual Curiosity Sexual Curiosity
Miracle Nepal: पुरुषका दुइ अण्डकोष किन सानो र ठूलो हुन्छन ?